Hay’adda Xuquuqda Aadanaha Ee HRW oo bayaan ka soo saartay arrintii Qalbi-dhagax | Tvsomalilandeurope
Hay’adda Xuquuqda Aadanaha Ee HRW oo bayaan ka soo saartay arrintii Qalbi-dhagax
Posted on September 21, 2017 by tvsomalilandeurope.net in Uncategorized // 3 Comments
Hay’adda u doodo xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa soo saartay bayaan ay uga hadlayso dhibaatada ay wajahaan qaxootiga Itoobiya ee ku sugan dalalka bariga Afrika.
Hay’adda ayaa sheegtay in dhibaatooyiin ay la kulmaan qaxootiga, qaarkoodna loo gacan geliyo dowladda Itoobiya oo raadineyso dadka mucaaradka ku ah.
Warka waxaa lagu xusay in dadka caanka ah ee mucaaradka ku ah Itoobiya ee loo dhiibay maamulka Addis ay ka mid yihiin kuwa haysta dhalashooyiinka dalal reer galbeed ah.
Dadkaasi waxaa ku jiray nin dhalasho British haystay oo lagu qabtay Yaman iyo qof kale oo lagu qabtay South Sudan oo dhalashada Norway haystay.
Sidoo kale hay’adda ayaa xustay Cabdikarim Sheekh Muse oo lagu naaneyso Qalbi Dhagax oo la sheegay in dowladda Soomaaliya ay u gacan gelisay Itoobiya.
Cabdikarim wuxuu ka mid ahaa guddiga fulinta ee Jabhadda Xoreynta Soomaali Galbeed ee ONLF, wuxuuna dhowr sano ku noolaa magaalada Muqdisho.
War ONLF ay soo saartay xilli hore ayaa lagu sheegay in “qoyska Cabdikarim oo dhan ay dileen ciidamada Itoobiya”. Waxay sheegtay in markii Gaalkacyo lagu qabanayay uu halkaasi ka doonay qof qaraabadiisa ah si uu Muqdisho u geeyo looguna daaweeyo.
“Dowladda Soomaaliya way diiday in qoyskiisa ay booqdaan xilligaas oo ay sheegeen in ay sii deyndoonaan”. Sida ONLF ay sheegtay.
Hay’adda difaacdo xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa qortay in Somaliland dhankeeda ay qaxooti ku qasabtay in ay Itoobiya ku noqdaan.
“Siddeed ka mid ah dadkii noqday ayaa lagu jirdilay gudaha Itoobiya”, sida HRW ay sheegtay.
Dowladda Soomaaliya ayaa Qalbi Dhagax ku eedeysay in uu argagixiso taageerayay, sidaa darteedna “Amniga uu halis ku ahaa”.
Balse ururka uu ka tirsanaa ee ONLF ayaa beeniyay dhammaan eedahaasi, waxayna ku tilmaameen “in uu xaq u dirir ahaa” Cabdikariim Sheekh Muse (Qalbi Dhagax).
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa qaabilay mooshin ku saabsan sida loo wajahay arrinta Qalbi Dhagax, waxaana markii dambe loo saaray guddi baaritaan ku sameeya oo 15 xubnood ka kooban.
3 Comments on Hay’adda Xuquuqda Aadanaha Ee HRW oo bayaan ka soo saartay arrintii Qalbi-dhagax
Grocery Delivery // April 12, 2018 at 9:00 am //
Fake Shoes // April 13, 2018 at 8:39 am //
Office Picture // April 13, 2018 at 11:51 am //
Technology Definition on Daawo Xisbiga Waddani Oo Cududiisa Taageere Ku Soo Bandhigay Maanta Magalada Boorama
SEO on Hargeysa oo lagu daah-furay dugsi loogu magac daray Dayah College Of Engineering And Industrial Science oo lagu baran doono farsamada gacanta
Petsmart Locations on War Deg Deg :Taliyaha Ciidanka Asluubta Somaliland Oo Shil Baabuur Ku Dhaawacmay Oo Ka Dhacay Degmada Baki.
SEO on Daawo;Taliyaha Ciidanka Booliska Somaliland Oo Markii Ugu Horeysay ka Hadlay Rag Loo Soo Qabtay Falalkii Loo Gaystay Masuuliyiintii Ka Tirsan Xisbiga Mucaaridka Ee Waddani.
recycle battery recycling newbury on Madaxweynaha Soomaaliya oo xalay gaaray magaalada Cammaan ee dalka Jordan